Iwu dị mma (Iwu Mweghachi na Mwepu Marijuana) na Congress - Onye ọka iwu Cannabis - Tom Howard - Iwu Iwu maka Marijuana & Hemp Businesses.
The Kọmitii ikpe announcedlọ na-ekwupụta na ya na-akwado nkwado maka ịhapụ wii wii na gọọmentị etiti. N'iji usoro iwu, anyị nwere ụgwọ ahụ nke akwadoro na Wenezde, Nọvemba ụbọchị 20, yana ụgwọ ahụ na-ewepu wii wii na dutọ oge 1 nke Iwu A na-achịkwa. Anyị nwere ihe ọhụrụ Mwepu na Mwepu Marijuana (MAKA) Omume gafere 24-10 na arụmụka kachasị ọhụrụ.
Kedu ihe ga-abụ mmetụta nke Iwu ỌZỌ?
Iwu ahụ nwere ohere nnabata dị elu na Houselọ zuru oke ma ọ bụrụ na ndị Democrats merie n'ọgụ megide ndị Republicans ebe Onye isi Onye isi Mitch McConnell na-agbadosi ike megide iwu akwado wii wii. Ọ bụrụ na iwu ga-arụ ọrụ nke ọma, anyị ga-enwe ọnọdụ nke iwu ahụ ga-echekwa ndị mejọrọ wii wii. A ga-ewepụ ihe ndekọ banyere mpụ ha ma ziga ikpe ha maka ikike ọzọ.
Ejikọtara ụgwọ ahụ iji kagbuo ma mebie cannabis n'ọtụtụ ụdị ndị gbadoroburu na Agha Ọgwụ. A ga-ezipụ ụfọdụ mmebi nke osisi maka mkpocha na ebumnuche ndị ọzọ nke ụgwọ ahụ ga-enwe mmetụta na sistemụ ikike n'ozuzu ya.
Dị ka akụkụ nke iwepụ na usoro nke ihe ndị a na-achịkwa, wii wii na tetrahydrocannabinols agaghịzi abụ akụkụ nke ihe ndị a na-achịkwa. Mwepụ na usoro ihe omume a ga-ewere ọnọdụ mgbe ọ na-erughị ụbọchị 180 mgbe ụbọchị nke iwu a dị.
Etu a ga-esi kwuo Bill na-azụmaahịa azụmahịa
Ihe mmejuputa iwu a n’iru ga - ahuputa udiri ahia ndi cannabis. Bureaulọ Ọrụ nke Statlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ ga-agbakọ, na-elekọta ma na-eme data ọha na eze na ngosipụta metụtara ndị mmadụ bụ ndị nwere azụmahịa na ụlọ ọrụ cannabis. N'otu oge ahụ, thelọ Ọrụ ahụ ga-agụnye ndị mmadụ n'ọrụ na ụlọ ọrụ cannabis.
Onu ogugu mmadu gha eme, ghari:
• Asambodo na ikikere
• Ọnọdụ nkwarụ
• Ọnọdụ ezinụlọ na alụmdi na nwunye
• Ọmụmụ Ọmụmụ
• Idebanye aha ụlọ akwụkwọ
• Ọnọdụ vetiran soja
• inweta agụmakwụkwọ
Site na ichikota data ekwuputara, ụlọ ọrụ gọọmentị ga-enwe ike ịma ngalaba dị na Iwu a ga-enwe mmetụta kachasị mma na azụmaahịa cannabis. Inye ụdị data ahụ ga-ekpebi etu a ga-esi tinye iwu gọọmentị.
Kedụ ka Iwu ahụ ga-esi kwụsị Agha Ọgwụ Ọgwụ?
Agha a na-a Drụ na ọgwụ ọjọọ bụ mkpọsa nke gọọmentị etiti gọọmentị US na-eduzi. Ọ gụnyere mmachi ọgwụ na mgbochi ndị agha bu n’obi iji belata ihe iwu na-akwadoghị nke so na azụmaahịa ọgwụ na USA. Richard Nixon, onye bụbu onye isi ala, kwupụtara okwu ahụ na 1971 ma kwupụta otu usoro iwu ọgwụ nke e mere iji belata mmepụta, nkesa na oriri nke ọgwụ.
Dika akuku iwu ohuru, ndị mmadụ metụtara na Ọgwụ megide Ọgwụ A ga-enye ha ego iji hazie ọrụ ọgwụgwọ ọgwụ eji eme ihe. Ihe oru Gọọmentị Community Reinvestment Grant ga-enye ndị ọrụ ruru eru ego dị mkpa. N'okpuru okwu 'iji ọgwụ eji eme ihe', anyị na-amata ihe ngosi na-egosi, usoro ọkachamara na ahaziri nke na-enyere ndị ọrịa nwere nsogbu ahụ ike. Ntinye na mgbake ga-agụnye nyocha, nyocha, na nlele ahụike zuru oke.
Okwu a bụ 'ụlọ ọrụ tozuru oke' pụtara nzukọ na-anaghị akwụ ụgwọ nke na-anọchite anya obodo ma ọ bụ akụkụ dị mkpa nke obodo ebe ọrụ ahụ dị maka ndị agha ahụ metụtara. N ’usoro nke ise nke Iwu nke 5, anyị nwere ike ịchọta okwu ndị na-achịkwa ikike ndị mmadụ na-eji ọrụ ọgwụgwọ.
Kedụ ka usoro Iwu A ga-esi agbanwe ndu anyị?
N'ọtụtụ ọnọdụ, War on ọgwụ na-eme ihe dabere na mmebi iwu nke ọgwụ. Agbanyeghị, na Iwu Iwu Ọhụụ, ọnọdụ ahụ dị iche. Anyị nwere ihe karịrị otu ikike ikwu na iwu gọọmentị ga-agbanwe ụzọ anyị si ahụ wii wii na ngwaahịa cannabis. The War on ọgwụ ọjọọ bụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nwere ọtụtụ nsonaazụ obodo anyị. Ugbu a, anyị nwere Iwu Kachasị Ewu nke nwere ike ịgbanwe echiche anyị na omume anyị kpamkpam ma a bịa na imepụta na ojiji nke ihe ndị na-eme ka akụnụba.
Dịka akụkụ nke Iwu Kachasị Ewu, ọ ga-ekwe omume ịnwe ikike nke ọtụtụ ndị nwere ndekọ omempụ banyere iji ọgwụ na nkesa. A hapụrụ ya ka ọ hụ ka mmadụ ole ga - enweta echiche dị iche site n'ụlọ ikpe mgbe a na-enweta mmejọ wii wii dị ala. Ọ bụrụ na nke a emee, ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwe ike ịnweta nnwere onwe na ndekọ mpụ dị ka akụkụ nke mmejuputa iwu MAKA Ọhụụ.
Nweta tonweta Ihe Niile Pụrụ Isi n’aka Anyị
Debanye aha ugbu a ka ị debanye aha maka onyinye anyị iji nye gị ohere ịnweta ozi ụlọ ọrụ ọtụtụ cannabis. Gwa anyị aha mbụ & adreesị email gị ma ị ga - amalite inweta ihe gbasara otu anyị nwere ike isi nyere gị aka n'ịgagharị ụlọ ọrụ cannabis taa.
[yikes-mailchimp ụdị = "1"]